Janine Mendes-Franco, mpandray anjara efa ela, mitondra ny tantaran’i Karaiba ho an’ny mpamaky manerantany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Febroary 2021 5:10 GMT
Sary natolotr'i Janine Mendes-Franco, nahazoana alàlana.
Monina any Trinité sy Tobago, Janine Mendes-Franco dia nandray anjara tato amin'ny Global Voices nanomboka ny taona 2006 ho tonian-dahatsoratry ny faritra Karaiba. Manana lahatsoratra miisa 7.300 mahery amin'ny anarany, nitatitra momba ity faritra midadasika ity matetika amin'ny fifantohana manokana amin'ny zavakanto sy ny kolontsaina i Janine.
Global Voices: Inona no ataonao ankoatra ny GV ? Inona no zavatra hafa mahaliana anao?
Janine Mendes-Franco (JMF): Mpanoratra sady mpamokatra horonantsary aho, ka mandany ny androko amin'ny ampahany betsaka izany ankoatra ny ankohonana. Milalao gitara aho (tiako ny mihira, ny mozika ary mandihy) ho fialamboly. Tiako ny mamaky boky nefa mahatsapa ihany koa aho fa manana fahalianana, indrindra ankehitriny, hifandray amin'ny natiora, ka mety manao dia an-tongotra na mihazakazaka, mikarakara zaridaina, na manao yoga ivelan'ny trano fotsiny aho. Iray amin'ireo toerana tiako indrindra ny fandriana mihantona eo anelanelan'ny hazo kakao roa ao an-jaridainako.
GV: Inona ny zavatra mahasarika ny olona aminao ?
JMF: Be tsy miteny aho.
JMF: Tena izy io.
GV: Ahoana no nahitanao ny GV sy ny nanombohanao handray anjara ?
JMF: Tamin'ny alàlan'i Georgia Popplewell, izay nandrisika ahy hanomboka bilaogy. Tantara ny ambiny, araka ny tenin'izy ireo.
JMF: Mampiseho ny modely amin'ny mety ho endrik'izao tontolo izao izany raha toa ka mifandray amin'ny fikasana hahatakatra isika rehetra fa tsy amin'ny fikasana hanaporofoana fa manana ny marina.
JMF: Ahafahako mitondra ireo tantaran'i Karaiba ho an'ny mpamaky manerantany izany.
JMF: Tsy dia nanova ny fomba fijeriko an'izao tontolo izao loatra izany satria vao mainka nanamafy ny fiheverako fa ny fitoviana kokoa no misy amintsika rehetra noho ny fahasamihafana.
Araho ao amin'ny Twitter i @JanineMFranco